I-smartphone ye-Xiaomi CC9: ukubhengezwa komgca omtsha | TeraNews.net
I-smartphone ye-Xiaomi CC9: ukubhengezwa komgca omtsha
umbhali Iindaba zeTera Papashwe ngomhla 02.07.2019
Ingxokolo yaseTshayina ithathe indawo ethembekileyo kwintengiso yehlabathi jikelele yokwenza iifowuni ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi. Kwaye ngoku lixesha lokuba uye kwiindawo ezintsha. I-Xiaomi CC9 i-smartphone, okanye endaweni yoko ilayini epheleleyo yezixhobo ikulungele ukuphumelela iintliziyo zabasebenzisi.
Umgca omtsha womenzi waseTshayina ubandakanya iimodeli: CC9, CC9e kunye neCCCCNUMX Meitu Edition. Zonke izixhobo zisekwe kwi-Mi 9, okanye endaweni yoko, yinguqulo eguqulweyo ngokupheleleyo yelungelo lokushicilela. Ngomehluko omnye-endaweni yeprosesa ye-Qualcomm Snapdragon 9 enamandla, imveliso entsha ifumene i-Snapdragon 855.
I-Xiaomi CC9 i-smartphone: izibonelelo
AmaTshayina ngabantu onokuqikelelwa. I-Siaomi iyayazi indlela yokugcina kwaye ungalahlekelwa ngumthengi. I-CC9 ine-Mi9 ye-AmoLED 6,39 ye-intshi ye-intshi ye-FullHD ukubonisa + isikrini kunye nesikenisi sokufaka umnwe. Ukukhanya kwescreen kwe-600 cd / m2.
Abasebenzisi bafuna i-selfie esemgangathweni- akukho ngxaki. Ikhamera ephambili yi-Sony IMX586 ngesisombululo se-48 MP, kunye nekhamera engaphambili kwi-32 MP ene-aperture ye-F / 1,6. I-adaptha ye-NFC, i-emitter ye-infrared, isandi se-Hi-Res HD-iseti esemgangathweni yeefowuni zanamhlanje.
Kodwa ngozimeleyo, i-Xiaomi CC9 i-smartphone yaze yasebenza ngakumbi iflegi ye-Mi 9. Umvelisi ufake ibhetri enomthamo we-4030 mAh. Ngenxa yokuba kukho iprosesa "ebuthathaka" ye-Snapdragon 710, into entsha iya kubonisa ukusebenza kwexesha elide kwityala elinye.
U-Xiaomi uphawula ukuba i-smartphone iya kuhamba ngokuthengisa ngemibala emithathu. Ukukhanya kwelanga kwikhephu ”- njengokumhlophe, umahluko okhoyo omnyama, nakwimeko eluhlaza okwesibhakabhaka eneempawu ezityikityiweyo. Intloko yale nkampani, uLi Zun, ukwabhengeza namaxabiso e-smartphone. Elona xabiso lincinci le-6 / 64 inguqulelo kwi-260 yeedola zaseMelika. I-smartphone ene-6 GB ye-RAM kunye ne-128 flash - 290 $. Amaxabiso kwintengiso yaseTshayina. Ungathenga ifowuni apha.
INokia C20 Plus ye-90 Euro-inkampani ibuyele kwiziseko
I-Titan Pocket -I-smartphone ye-Android kunye nekhibhodi yeBlackBerry
I-AirTag Apple-umkhondo omncinci wezinto
I-BlackBerry Key 3 ye-smartphone ene-5G inkxaso